Soosaarayaasha Soosaarayaasha Mat-ka Ciyaaraha Xaraashka ah ee Xun-xun ee sunta iyo Warshadda | Yilibao
Waxyaabaha aan sunta lahayn iyo kuwa bey'adda ku habboon: XPE derin-ciyaareedka waxaa laga sameeyaa xumbada XPE taas oo badbaado u leh, bey'ada u fiican oo aan sun ahayn.
120 * 180 * 0.5cm
150 * 180 * 0.5cm
180 * 200 * 0.5cm
120 * 180 * 1cm
150 * 180 * 1cm
180 * 200 * 1cm
120 * 180 * 1.5cm
150 * 180 * 1.5cm
180 * 200 * 1.5cm
1. Wax sun ah oo aan bey'adda u wanaagsaneyn: XPE ciyaarta sariirta waxaa laga sameeyaa xumbada XPE taasoo u ah badbaado, bey'ad saaxiibtinimo iyo sun aan sun ahayn.
2. Difaac: XPE sariirta ciyaarta waa mid jilicsan oo aan siibiibiq ahayn, dhallaanka ayaa ku ciyaari kara oo si ammaan ah ugu dul guran kara.
3. Tacliin: Waxaa jira xarfaha alifbeetada, xayawaanka, tirooyinka iwm naqshadaha oo lagu daabacay sariirta. Naqshado midab leh oo qurux badan labada dhinac ee derin. Kuwani waxay ku fiican yihiin waxbarashada ilmaha.
4. Si fudud loo nadiifiyo: XPE sariirta ciyaarta laguma galiyo biyo la’aan. Waxaad ku nadiifin kartaa maro qoyan, way fududahay in la nadiifiyo.
5. Adag oo adkaysi badan: XPE sariirta ciyaarta ayaa ka xoog badan kana adkaysi badan tan ciyaarta EPE.
6. Wax sun ah: XPE matxafka ciyaarta waxaa laga sameeyaa xumbada XPE oo ah shey bey'ada u fiican.
7. Eco-friendly: XPE mat der play is made of XPE foam taas oo ah wax aan sun ahayn.
8. Ma-siibiibix ah: XPE derin-cayaareedku ma siiban karo, carruurta ayaa ku ciyaari kara oo si ammaan ah ugu dul guran kara.
9. Jilicsan: XPE waa maaddo jilicsan.
10. Midab leh: Waxaa jira naqshado midabbo iyo qurux badan leh oo dusha sare ah.
Waxaan hadda haysannaa koox xirfad leh, oo waxqabad si aan u siino adeegyo tayo wanaagsan leh macaamiishayada. Waxaan inta badan raacnaa mabda'a macaamiisha u janjeedha, faahfaahinta oo diirada saarey Qiimaha ugu Jaban Shiinaha Biyo La'aanta Shilalka Biyo La'aanta sunta BPA Laab Laabi Karo iyo La Qaadan Karo XPE Baby Play Mat, Aad ugu dadaalaya sidii loo heli lahaa guul joogto ah oo ku saleysan tayada, kalsoonida, daacadnimada, iyo dhammaystirka fahamka dhaqdhaqaaqa suuqa.
Qiimaha ugu jaban Shiinaha Cayaaraha Ciyaarta Mat iyo qiimaha xumbo XPE, Waqtigan xaadirka ah shabakadeena iibka ayaa si joogto ah u kordheysa, hagaajinta tayada adeegga si loo daboolo baahida macaamiisha. Haddii aad xiisaynayso wax xal ah, waa inaad nala soo xiriirtaa wakhti kasta. Waxaan rajeyneynaa inaan kula sameyno xiriir ganacsi oo guuleysta mustaqbalka dhow.
0.5cm dhumucdiisuna waxay ahayd XPE derin ciyaarta waxay isticmaali kartaa bac aan xirnayn iyo bacda PE si ay u xirxiraan.
1cm, 1.5cm dhumucdiisuna waxay ahayd XPE rooga ciyaarta oo keliya ayaa isticmaali kara bacda PE si aad u xirato
Hore: Shaxda Carruurta oo leh Saxaro iyo Dhismo Dhismeyaal
Xiga: Shaxda Carruurta Yaryar
Epe xumbo Waxyaabaha Ciyaar Mat
Epe xumbo Ciyaar Mat
Epe Waxyaabaha lagu ciyaaro Mat
EPE Qalabka Ciyaarta Mat